2011 ~ The Light of Truth
Thursday, November 10, 2011 The Light Of Truth No comments
ဒီတရားဒေသနာကို အစမပြုခင် ဧဖက်သြ၀ါဒစာ အခန်းကြီး(၃)၊ အငယ်(၂၀)က ကျမ်းချက်ကို အရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။
ငါတို့၌ပြုပြင်သော တန်ခိုးတော်အတိုင်း ငါတို့တောင်းပန်ကြံစည်သမျှထက်
အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းငှာ တတ်နိုင်တော်မူသော ဘုရားသခင်သည် ………
တစ်ခါတရံမှာ ကျနော်တို့တွေသိပ်ပြီးမျှော်လင့်ထား၊ တောင့်တထားတဲ့အရာကို ဘုရားသခင်ဆီမှာ တောင်းပါလျက်နဲ့ မရတဲ့အချိန်မျိုးတွေရှိတတ်သလို ဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကြိန်းသေပေါက်မျှော်လင့်ထားတာတွေ လွဲချော်သွားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာ တကယ့်ကို ခံစားရခက်၊ နားလည်ရခက်တတ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာ တောင်းကြလော့၊ တောင်းလျှင်ရလိမ့်မည် ဆိုတဲ့ကျမ်းချက်ကို အာဂုံဆောင်ထားပြီး တစ်ဘ၀လုံးအတွက် ပုံသေကားချတွက်ထားလို့ မရဘူးဆိုတာကို ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ သခင်ယေရှုက ဒီစကားကိုပြောခြင်းဟာ ဆုတောင်းခြင်းတွေအတွက် အဖြေရဖို့အာမခံချက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တောင်းတိုင်းရမယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အနန္တတန်ခိုးတော်က ကျနော်တို့ရဲ့ ဆုတောင်းခြင်းတွေထဲမှာကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်ဆိုတာ နောက်ပိုင်းမှာပိုပြီး သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ တမန်တော်ပေါလုက “ ငါတို့သည် ဆုတောင်းသင့်သည်အတိုင်း အဘယ်ဆုကိုတောင်းရမည်ကို မသိကြ ”လို့ ရောမ ၈း၂၆ မှာညီးတွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပေါလုလို သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ယောက်တောင်မှ ဆုတောင်းသင့်တဲ့ အရာကို တစ်ခါတရံမှာ မသိဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့တွေတောင်းနေတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကရော တောင်းသင့်၊ တောင်းထိုက်တဲ့ ဆုတောင်းချက်တွေဟုတ်ပါ့မလား။ ကျနော်တို့တောင်းသလောက် ပါချည်ပါချဲ့ဆုတောင်း ချက်တွေကိုပဲ အဖြေပေးနိုင်တယ်ဆိုရင် GOD ALMIGHTY ဆိုတဲ့ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဆီမှာ ဘယ်ကလာပြီး ကျနော်တို့ထက်ပိုပြီး ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့အကြံအစည်တော်ရှိတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတော့မလဲဗျာ။ သမ္မာကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါ နတ်ဆိုးကစလို့ အခြားသောနတ်ဘုရားတွေဆီမှာလည်း မစနိုင်၊ ပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းတန်ခိုးတွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တဖန် မာရ်နတ်သည် ယေရှုကို အလွန်မြင့်လှစွာသော တောင်ပေါ်သို့ဆောင်သွား၍ ဤလောက၌ရှိသမျှသော တိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်း၊ ထိုတိုင်းငံတို့၏ ဘုန်းစည်းစိမ်ကို၎င်း ပြညွှန်၍ ကိုယ်တော်သည် ငါ့ကိုညွှပ်ပြပ်ကိုးကွယ်လျှင် ယခုပြလေသမျှတို့ကို ငါပေးမည်ဟုဆိုလေ၏။ မဿဲ ၄း ၈-၉ သူ၏သခင်တို့သည် နောက်တဖန် စီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိသည်ကို သိမြင်လျှင် ပေါလုနှင့် သိလတို့ကို ဖမ်းဆီးဆွဲငင်၍ ရုံးတော်သို့ပို့ကြ၏။ တမန်တော် ၁၆း ၁၉ ဒီကျမ်းချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နတ်ဆိုးတွေ၊ နတ်ဘုရားတွေလည်း တောင်းရင် ပေးနိုင်တယ်။ မစနိုင်တယ်ဆိုတာကို သိမြင်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေရဲ့ တောင်းလျှောက်မှုတွေ၊ ဆုတောင်းချက်တွေအပေါ်မှာ အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့ အဖြေပေးပုံက နတ်ဆိုးတွေ၊ နတ်ဘုရားတွေလောက်ပဲလား။ ကျနော်တို့ တောင်းပန်ကြံစည်သမျှထက် အလွန်ထူးခြားစွာပြုခြင်းငှာ တတ်နိုင်တော်မူသော ဘုရားသခင်က ကျနော်တို့ရဲ့ မပြည့်မစုံတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေ၊ အနာကတခြား တောင်းတဲ့ဆေးကတခြားဖြစ်နေတဲ့ ဆုတောင်းသံတွေကို ကျနော်တို့ဆီမှာ အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကို ပြန်လည်ပေးသနားခြင်း အားဖြင့် ဒါမှမဟုတ် ကျနော်တို့ရဲ့ တထွာတမိုက်အသိဉာဏ်လေးနဲ့ ချင့်ချိန်တွက်ဆပြီး ကြီးမားလှပြီထင်နေတဲ့ ပါချည်ပါချဲ့ ဆုတောင်းချက်တွေကို ကျနော်တို့ထင်မှတ်မထားမိအောင်ကြီးမားလှတဲ့ အံ့သြဖွယ်ရာအဖြေတွေကို ပေးတတ်သောသူ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို ကျနော့်ကို ဘုရားသခင်က သွန်သင်တတ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ “ မင်းတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲ ပေးတတ်ရင် ငါဟာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ်တော့မလဲကွာ။ မင်းတောင်းတဲ့ မင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေထက် ငါ့အကြံအစည်၊ ငါ့အဖြေကပိုပြီး ကြီးကျယ်ခမ်းနားပါတယ်။ မျှော်လင့်သလိုဖြစ်မလာလို့ဆိုပြီး ငါ့ကို မေးခွန်းထုတ်မစောပါနဲ့။ အပြစ်တင်မစောပါနဲ့ဦး။ ” “ ဒီမှာ ငါ့သား၊ မင်း မျှော်လင့်သလိုဖြစ်မလာတဲ့အချိန်ဟာ မင်းမျှော်လင့်မထားခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ၊ ကြီးကျယ်မှုတွေကို ငါအဖြေပေးတော့မယ့်အချိန်ပဲ …. ” ဘယ်လိုလဲ …. မိတ်ဆွေ၊ ခင်ဗျားအသက်တာမှာရော ဒါမျိုးကြုံခဲ့ဖူးလား ဒါမှမဟုတ် အခုကြုံနေရလား။ ခင်ဗျားမျှော်လင့်ထားသမျှတွေ ရေစုန်မျှောသွားပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားမမျှော်လင့်ရဲလောက်အောင် ကြီးမားတဲ့အဖြေတွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ ခင်ဗျားဟာ ၀ိညာဉ်ရေးရာ ရေဆန်ခရီးကို ဘုရားသခင်နဲ့အတူ ခရီးနှင်ရတော့မယ်လို့ မှတ်ပါ။ မိတ်ဆွေ ….. အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံခဲ့ရဖူးတဲ့သူတစ်ယောက် သမ္မာကျမ်းစာမှာရှိပါတယ်။ တမန်တော် ၃း ၁- ၁၁ ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။ ဒီအဖြစ်အပျက်မှာ ပေတရုနဲ့ယောဟန်က ဗိမာန်တော်မှာဆုတောင်းဖို့အသွား တင့်တယ်တံခါးဝမှာ တောင်းရမ်းစားသောက်နေရတဲ့ လမ်းမလျှောက်နိုင်သူတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံပါတယ်။ အဲဒီလိုဆုံတဲ့အခါကျတော့ လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ထုံးစံအတိုင်း သနားအောင်ပြောဆိုပြီးတောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါကို ပေတရုက ငါတို့ကို မျှော်ကြည့်စမ်း လို့ အတည်ပေါက်နဲ့ပြောတယ်။ ဟိုမှာ လမ်းမလျှောက်နိုင်လို့ တောင်းရမ်းစားသောက် နေရတဲ့သူကလည်း တစ်စုံတခုကိုတော့ပေးမှာပဲ ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ အားမပါ့တပါ့အကြည့်နဲ့ ကြည့်ရှာပါတယ်။ ကဲ …. ပေတရုရဲ့စကားကို နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်။ “ ငါ့၌ရွှေငွေမရှိ။ ” ဘယ့်နှယ်ဗျာ ….. စားရမဲ့၊ သောက်ရမဲ့မို့တောင်းစားနေတာကို အခုချက်ချင်းပဲ တစ်နေ့စာနေ့တွက်ကိုက်အောင် ပေးတော့မလိုလို လေသံမျိုးနဲ့ မျှော်ကြည့်ခိုင်းပြီးခါမှ အခုကျတော့ ဘာမှလည်းပေးစရာမရှိဘူး … တဲ့။ ကျနော်တို့သာ လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူနေရာမှာသာဆိုရင် ပေတရုကို ထရိုက်မိမယ်နဲ့တူပါတယ်။ တကယ်တော့ တောင်းရမ်းစားသောက်နေတဲ့သူဘက်က မျှော်လင့်ထားတာက ငွေစနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် အရမ်းရက်ရောရောပေးမယ်ဆိုရင်လည်း တစ်နေ့စာဖူလုံရုံလောက်ပေါ့ဗျာ။ အခုတော့ ကြည့်ပါဦး။ ပေတရုပြောလိုက်ပုံက …. သူမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာဆိုလို့ ဘာဆိုဘာမှမရှိဘူးတဲ့။ မျှော်လင့်ချက်ထားသမျှ ဖြစ်မလာတော့ဘူးဆိုတော့ ပွဲပြီးပြီပေါ့ဗျာ။ ဒါက မျှော်လင့်သလိုဖြစ်မလာတော့တဲ့အခါတိုင်းမှာ ကျနော်တို့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်တတ်တဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုပါ။ ဘုရားသခင်ရဲ့နည်းလမ်းကတော့ ကျနော်တို့ပွဲပြီးသွားပြီ၊ ဘာမှမျှော်လင့်စရာမရှိတော့ဘူး ဆိုတဲ့အချိန်မှ အပြောင်မြောက်ဆုံးသော တာထွက်ခြင်းကိုစတာပါပဲ။ မျှော်လင့်သလိုဖြစ်မလာတော့တဲ့နောက် ….. ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာသလဲ … ဆက်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။ “ ရှိသည့်အရာကို သင့်အားငါပေးမည်။ နာဇရက်မြို့သား ယေရှုခရစ်၏နာမတော်အားဖြင့် ထ၍လှမ်းသွားလော့။ ” တကယ်ဆိုသူမျှော်လင့်ထားတာ လှမ်းလျှောက်နိုင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလောက်အထိဖြစ်လာဖို့လည်း စိတ်တောင်မကူးခဲ့ဖူးပါဘူး။ လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အားနည်းချက်ကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ၀မ်းရေးအခက်အခဲအတွက်ပဲ တစ်ပြားပဲရရ … တစ်ကျပ်ပဲရရ ….. တောင်းတာပါ။ အဲဒီလို သူတောင်းတဲ့အခါ သနားလို့ပေးသွားတဲ့သူတွေရှိတော့လည်း ရရ … စားစားဘ၀နဲ့ပဲ ဆေးဆရာနဲ့ကုဖို့ဆိုတာ အိမ်မက်တောင် မမက်ရဲခဲ့ဖူးပါဘူး။ တကယ်လို့ ပေတရုနဲ့ယောဟန်ဆီကနေ သူမျှော်လင့်ထားသလို တစ်ပဲတစ်ပြားရခဲ့ရင်လည်း နောက်နေ့ကျရင် သူဟာ တောင်းရမ်းစားရဦးမှာပါပဲ။ အခုတော့ကြည့်ပါဦး …. သူမျှော်လင့်ထားသလို မဖြစ်လာခြင်းက ပိုလို့တောင်ကောင်းနေပါရော့လား။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့တွေ မျှော်လင့်တောင်းလျှောက်နေတဲ့ဆုတောင်းသံတွေကလည်း အဲဒီလူလိုပါပဲ။ မျှော်လင့်သလိုဖြစ်မလာခဲ့ရင် စိတ်ဓာတ်ကျနေမယ့်အစား ဘုရားသခင်ကိုအားရပါးရချီးမွမ်းလိုက်စမ်းပါ။ မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာ မျှော်လင့်မထားဖူးတဲ့အရာတွေကို တွေ့ကြုံခံစားရတော့မယ့်အချိန်၊ မိတ်ဆွေ မျှော်လင့်မထားလောက်အောင် ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ရဖို့ မဝေးတော့ပါဘူး။ ဘုရားသခင်ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့အခိုက်အတန့်အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ လိုချင်တောင့်တမှုနဲ့ ရူပါရုံတွေအပေါ်မှာ တစ်ချက်ကောင်း မစတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်သက်လုံးကောင်းအောင် မစတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နပ်စာအဖြေပေးတတ်တဲ့သူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်သက်စာအဖြေပေးတတ်တဲ့သူပါ။ ကျနော်ယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်း ဘုရားသခင်အပေါ်မှာ နားလည်လာတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဘုရားသခင်ဟာ ဘယ်တော့မှ တစ်နပ်စားအဖြေမပေးဘူး၊ လက်ပူမတိုက်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ဒီတရားဒေသနာအားဖြင့် မိတ်ဆွေရဲ့မျှော်လင့်သလိုဖြစ်မလာတဲ့အချိန်အခါအပေါ်မှာ ငြိမ်သက်ခြင်းရပါစေ၊ မျှော်လင့်မထားလောက်အောင် ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အဖြေတွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေ၊ ရူပါရုံတွေအတွက် အဆင့်ပြင်ထားပါတော့လို့အားပေးရင် နိဂုံးချုပ်ပါရစေ။
ချစ်ခြင်းအားဖြင့် ………. မိုးစက်နီ